Fandraisana ny FAD andiany faha-15 Misy tombony ho an’i Madagasikara
Mariky ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny kaontinanta Afrikanina ny fampiantranoan’i Madagasikara ny fivoriana faharoa,
hamaritana ny tetibola entina hanampiana ny firenena Afrikanina andiany faha-15 na FAD 15 izay hotanterahina ny 1-3 jolay ho avy izao. Voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny handraisana azy ity ary hiteraka tombony amin’ny toekarena. Vahiny 150 no andrasana toy ny filohan'ny Banky Afrikanina an'ny Fampandrosoana, Akinwumi Adesina. Hisy akony amin’ny toekarena izany satria ahafahana mahazo fanampiana entina hampiroboroboana ny sehatra fandraharahana. Raha hita ny fahaiza-manaon’i Madagasikara dia hiitatra amina sehatra maro ny famatsiam-bola mety ho azo.